Maty tokoa ve ny tsy fivadihan'ny marika? Sa tsy fivadihan'ny mpanjifa? | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 18, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Isaky ny miresaka momba ny tsy fivadihan'ny marika aho dia matetika no mizara ny tantarako manokana rehefa mividy ny fiarako. Nandritra ny folo taona mahery, dia tsy nivadika tamin'i Ford aho. Tiako ny fomba, ny kalitao, ny mateza ary ny vidin'ny famarotana indray ny fiara sy ny kamiao novidiko avy tany Ford. Saingy niova izany rehetra izany tokony ho folo taona lasa izay rehefa nahatsiaro ny fiarako.
Isaky ny nilatsaka ambany noho ny hatsiaka ny maripana ary avo ny hamandoana, dia nivoha ny varavaran'ny fiarako. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha vantany vao nosokafanao ny varavarana dia tsy azonao nikatona. Rehefa tapitra ny fotoana maro nanidiana mafy ny varavaran'ny sisin'ny mpamiliko, ny mpivarotra nividianako ny fiara dia nandà tsy hiasa aminy maimaim-poana indray. Nijery tamim-pahatokisana ilay solontena aho ary nilaza taminy fa marina izany tsy namboarina mihitsy nandritra ny taona maro. Nolavin'ny mpitantana ny fangatahako ary nilaza izy ireo fa nanatanteraka ny fiambenana isaky ny fepetra takian'i Ford izy ireo ary tsy maintsy manomboka manome vola ahy isaky ny mitondra ny fiara.
Talohan'io fotoana io dia nahatoky tamin'ny marika aho. Saingy niova teo noho eo izany rehefa hitako fa tsy nahatoky tamiko ilay marika.
Tezitra be aho ka nitondra ny Ford tany ampitan'ny arabe ary natakaloko Cadillac vaovao ny fiara. Volana roa taty aoriana dia niresaka ny zanako lahy aho tsy nividy Ford ary nividy Honda izy. Noho izany, tsy latsaky ny $ 100 ny asa, Ford very mpivarotra fiara vaovao 2 tamin'ny tsy nanome toky fa voakarakara ho mpanjifa aho.
Mametra-panontaniana foana ny rehetra na tsia brand faithfulness maty. Mino aho fa mila manontany ny mifanohitra amin'izany isika mpanjifa tsy mivadika maty?
Ny 23% -n'ny mpanjifa ihany no tsy mivadika amin'ny marika rehetra amin'izao fotoana izao Maninona? Soa ihany, miaraka amin'ny Internet eo am-pelatanantsika, manan-tsafidy isika. Indraindray safidy an-jatony. Tsy ilaina ny tsy fivadihana amin'ny marika misy olana, ny mpanjifa dia afaka mandany 30 segondra ary mahita marika vaovao. Ary angamba marika iray izay feno fankasitrahana bebe kokoa amin'ny orinasan'ny mpanjifa.
Maninona ny mpanjifa no misaraka amin'ny marika iray?
57% ny mpanjifa misaraka amin'ny marika rehefa ny ny hevitra ratsy dia mijanona tsy voalamina raha mbola mitohy ny fanomezana vokatra mitovy amin'izany
53% ny mpanjifa misaraka amina marika iray rehefa nahazo izany famoahana data sy fanitsakitsahana data
42% ny mpanjifa misaraka amin'ny marika rehefa misy tsy misy serivisy ho an'ny mpanjifa mivantana / tena izy fanohanana
38% ny mpanjifa misaraka amin'ny marika rehefa misy tsy misy varotra sy fampiroboroboana ara-potoana na tolotra
Ao anatin'ny tontolon'ny fihenam-bidy sy entana azo atsipy, mino aho fa tsy hitan'ny orinasa intsony ny lanjan'ny mpanjifa mahatoky. Isan-taona dia manampy ny orinasa aho hitarika fitarihana bebe kokoa sy fahazoana vokatra sy serivisy. Rehefa manontany ahy izy ireo hoe inona no azon'izy ireo atao tsara kokoa, dia saika manomboka manontany azy ireo foana aho momba ny programa fihazonana sy ny tsy fivadihan'izy ireo. Sadaikatra amiko ny hoe handany vola an-jatony na an'arivony dolara ny orinasa hahazoana mpanjifa, fa handà azy ireo ny traikefan'ny mpanjifa izay mety handany ampahany kely amin'izany.
Na dia masoivoho aza dia efa niasa tamin'ny paikady fitazonana ahy. Rehefa nahazo ny anjaran'ny mpiasa aho tamin'ity taona ity, dia tsy nahazo fanantenana tamin'ny mpanjifa aho. Talohan'ny nahafoizako ireo mpanjifa dia nihaona tamin'izy ireo aho, nanisy fihenam-bidy ny fifanarahana nifanaovan'izy ireo ary nanome safidy momba ny fomba hahavitanay ny asa. Fantatro fa sarotra ny mahazo ny fitokisan'ny mpanjifa ary rehefa tandindomin-doza izy dia fantatro fa mila manarina aho ary manandrana manamboatra azy tsara. Tsy mandeha isaky ny mandeha io fa tsara lavitra noho ny voaroaka sy mamadika ny mpanjifa ankavia sy havanana.
Vao avy nizara infographic avy any Bolstra izahay tao amin'ny ROI an'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa. Ny sehatra fahombiazan'ny mpanjifa toa azy ireo dia ampiasaina hampianarana ny mpiasa anatiny, hamantatra ireo olana izay mahatonga ny mpanjifa hiala, ary hanampy anao handrefy ny vokatry ny fahombiazan'ny mpanjifa amin'ny tombom-barotra azon'ny marikao. Ireo fikambanana matotra dia mahita fa ny tombom-barotra ankapobeny dia miantraika mafy rehefa latsaka ny fitazonana ny mpanjifany. Ary ny famenoana ny siny dia handeha ihany mandra-pahatapitry ny volanao - izay hitantsika amin'ny fanombohana maro.
Ity ny infographic feno avy amin'ny Rave Review, Maty ny tsy fivadihan'ny marika:
Tags: brand faithfulnessmaty ny tsy fivadihan'ny marikampanjifa tsy mivadikaSerivisy ho an'ny mpanjifaCustomersangon-drakitra bangafamoahana datavelona amin'ny chatserivisy ho an'ny mpanjifa mivantanafanohanana mivantanaprograma tsy fivadihanahevitra ratsyfiderana faran'izay tsarafanamarihana mahatsikaikyserivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izyvarotra sy fampiroboroboana
Ahrefs dia mandefa fitaovana fanamarinana tranonkala vaovao tsy mampino